Dzidza gemology - Gemology course - International gemological institute - gemologist
Gemology ndiyo sayenzi chiwanikwa zvinhu, uye swa nhungirwa kurei bazi sayenzi mineralogy. Chidzidzo gemology rinofukidza zvose michina chokuita matombo anokosha uye chiwanikwa zvokuvakisa. makemikari yavo, mumuviri uye Optical zvivako, unyanzvi hunoshandiswa nokuda kugadzirwa chiwanikwa KUJEKA uye muzvinhu zvinogadzirwa nemakemikari, nokuveza uye makorari pamusoro matombo anokosha, uye zvakakoshesa nzira uye zvokuridzira basa iri kuziviswa, grading uye yokunyatsoongorora matombo anokosha.
Izwi rokuti 'gem zvinhu' rinofukidza huwandu hwakawanda hwezvimwe zviitiko. Zvizhinji zvezvinhu zvakagadzirwa nemaminerari, asi zve3000 kana zvakadaro, maminera anozivikanwa nemurume, chete nezvemhuri ye70 / 500 inoonekwa seine unhu hunofanirwa kune iyo yeboka inonzi 'gemstones'.
Vatinodzidzisa gemology nokuda beginners muna Chirungu kana French
Chinhu chikuru nhanganyaya mikuru matombo anokosha anowanzonzi rinowanikwa vokuCambodia pamusika. Izvi kosi pakutanga-pamwero rinosimbisa zvinokosha zvinoumba anokosha akadai rubhi, nesafiri, zircon, peridot, Garnet, netopasi, Tria Rose, crystalline Goldstone, chalcedony, obsidian, etc.
1 munhu: 100 $
2 kune 4 munhu: 60 $ / munhu wese
5 munhu +: 50 $ / munhu mumwe nomumwe
Ndapota taura nesu for information booking.
Dr. Mohamed Mohamed akati TOLBA apedza kurovedza kosi ari gemology. 1 zuva (6 maawa)
"Pana 15 April 2015 ndakanga vakapedza anonakidza uye hunonakidza zuva kudzidza gemological kosi pana Gemological Institute of Cambodia, Va Jean-Philippe aiva mudzidzisi wangu mumaawa 6 pokudzidza, Iye nyanzvi gemology. Ndinofunga Gemological Institute of kuCambodia ndiyo nzvimbo kodzero kuwana ruzivo pamusoro gemology uye matombo anokosha. "
Mr. Sergio (kubva Italy) uye Ms. WIRIYA (kubva Thailand) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
"Philippe Il proprietario è a nounhu molto competente E professionale nel alalla della gemmologia, Noi abbiamo fatto Un corso von mezza giornata mune cui Ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha a showroom notevole von gemme autentiche cambogiane E zvisiri ... insomma Se volete comprare rubini E zaffiri veri birmani recatevi Da Philippe è Il n ° 1 ane Siem kukohwa. Inoltre Se volte "- May 5, 2015
Mr. Carl (wokuEngland) uye Ms. AGYNESS (kubva China) apedza kurovedza kosi ari gemology. 1 zuva (6 maawa)
Mr. toh Hock An (kubva Taiwan) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
Master Hanz của(Kubva Philippines) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
Ms. Ramya Ponnada & Mr. Krishna Kanth Ponnada (kubva India) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
Mr. Sonny Rodriguez & Ms. Tiffany Rodriguez (kubva Philippines) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
"Kana vachida avimbiswa chiwanikwa mabwe, enda pano" - wandaitsvaka mhinduro panyaya chiwanikwa mabwe yaitengeswa pamusika mutana uye nenzvimbo ino akapa kwandiri vose Informations ndaifanira kuziva kunyanya nderechokwadi anokosha. Zviripachena vakawanda chiwanikwa muzvitoro pamisika uchatengesa imi nyepera ndivo. Ini ndanyoresa kune 3hour workshop uye zvechokwadi broadend ruzivo rwangu pamusoro matombo anokosha. Vakandipa certificate pashure uye zvakanga chaizvoizvo chakakodzera 3hours. Mr. Jean zvechokwadi wakazadzwa pamusoro anokosha. Ko tarisa Website yavo, taura navo uye ravachanoita ane tuk-tuk tora vachikukumikidzai pahotera yenyu. Chero zvazvingava usina kudzidza anokosha chete kushanyira uye kuona matombo anokosha ane nyore zvekutengesa - November 12, 2015
Mr. Thorstein uye Mr. Harwy (kubva Norway) apedza kurovedza kosi ari gemology. Hafu zuva (3 maawa)
Tom uye Kristin (kubva USA) & Norma uye Trevor (kubva Canada) apedza kurovedza kosi ari gemology.
Konstantin naSilviya (vokuBulgaria).
Miles, July, Rosie, Tilly & Sadza (kubva kuEngland).
Ms. Lee Hui Yun (kubva Singapore).
Annick & Bamba (kubva Australia).
Jasmine, Bruce & Allan (kubva kuPhilippines).
Marc & Lani, Kubva Los Angeles, California, USA
Ms. Ruth, kubva Indonesia
Mr. Jeff, kubva USA
Joshua & Michael, kubva USA
Stephanie & Mason, kubva Hong Kong
Gary, Diane & Barb, kubva USA
Anna & Diana, kubva Russia
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Imbirai Kwan, kubva Malaysia
"Kushanya Awesome - dzinonakidza uye ziso yokutanga" - nzvimbo Great kushanyira! Takatora 1 awa chidzidzo, izvo yakaguma kuva zvishoma nokuda zhinji ruzivo wakange kuzowanikwawo Jean. Jean kukuru panguva kwete achitsanangura mhando dzakasiyana mabwe asi akanga kukuru panguva ikasara kuupenyu munyika vokuCambodia akapoteredza uyewo inotonhorera chaizvo nyaya. Uyewo kuratidzwa mukuru kwazvo yezvirwere apo iwe mova kuona marudzi anokosha uye edza kufunga ndoupi chaiye, kurapwa kana kuti chakaita zvokugadzirwa! Panewo Kusarudzwa guru vomunharaunda vokuCambodia Anokosha kunotenga nenguva vanonzwisisa chaizvo mitengo mushure chidzidzo. Learnt zvizhinji, akanga akawanda kunonakidza uye dziine yakanaka vokuCambodia chiwanikwa uye hutsva vakawana kukoshesa gemology! - February 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, kuGreece
Ms. Katherine, wokuSpain, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Kudo, kubva Japan & William, kubva UK, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Firipi, kubva kuEngland, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, kuDenmark, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Ms. Jerica, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Ms. Lena, kubva Ukraine, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Ndashanyira Institute kuziva zvakawanda pamusoro vokuCambodia matombo. Ndikati nzvimbo ino zvinoitwa zvakanaka zvose - vashanyi, vatungamiriri, nyanzvi, vatengi. Pano unogona kuona uye 'ruzivo' zvose matombo enyika. Mashoko akajeka, mhepo iri anoshamisa. Ndinoda kukutendai Philippe chidzidzo chakanaka - March 14, 2016
Javier & Andrea, kubva kuEngland, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Tanya, Sebastian & Scott, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Taisirangana redu 8 gore mwanakomana yekare pamwe kuti kosi awa rimwe kubva ave vanofarira chaizvo anokosha, nematombo uye crystals. Jeanne-Pierre vakapedza kudarika dzinounzwa awa uye aiziva zvikuru uye nechido panhau gemmology. kwazvo mwanakomana wedu vakanakidzwa kosi, sezvakaita isu, kunyanya yechirongwa murabhoritari, kuziva anokosha akasiyana pasi maikorosikopu. Akafara kuenda kure naye chitupa uyewo Praseolite ibwe. Ndatenda. - March 29, 2016
Sangita & Daniel, kubva kuEngland, apedza kurovedza kosi ari gemology
Hilary & Ian, kubva kuAustralia, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Maria & Joanna, kubva kuPhilippines, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Akatora zuva kosi hafu panguva gemological Institute. Zvakanga Inodzidzisa chaizvo! Shure Chokwadi ichi, tiri zvachose 100% nechivimbo pamusoro dzinoongorora matombo anokosha. - April 8, 2016
O'Malley Family, kubva USA, pashure kudzidziswa kosi yacho muna Gemology.
Silvester & Silvia, kubva kuAustralia, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Dai 12, 2016
Ms. Akemi, kubva Japan, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Dai 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, kubva kuPhilippines, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Dai 29, 2016
Ma. KuRuzi, kubva kuPhilippines, & Gordon, kubva UK, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Dai 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Jamie & Ellie, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Pauline & Ronan, kubva kuFrance, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Sue, Maureen & Bruce, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Anne & Olivier, kubva kuFrance, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Max & Hester, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Carrie & Martijn, kubva kuAustralia, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Katherine, kubva kuAustralia, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Allesha & Ross, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Mr.Thiery, wokuFrance, apedza kosi kurovedza vhiki rimwe (maawa 30) muna gemology.
Ali & Joe, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Lenny, mudzidzi wedu gotwe, kubva kuFrance, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Steven & Jene, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Fiona & Shah, kubva kuEngland, apedza kurovedza kosi ari gemology.
Aislinn & Dominique, vanobva kuHong Kong.
Mhinduro dziri Kunze
55th Bangkok Anokosha uye Jewellery Fair
Nemhaka Mr Jitendra Patel Pakushanyira yezvirwere kwedu